Iimpawu kunye nendlela yobomi bekhokhonathi crab | Ngeentlanzi
Umfanekiso -Flickr / Arthur Chapman
Namhlanje siza kuthetha ngohlobo kanonkala owaziwa ngokuba ngowona mkhulu ehlabathini. Imalunga nayo Unonkala wekhokhonathi. Igama layo lenzululwazi ngu I-Birgus ballast. Nangona ithathwa njengononkala omkhulu emhlabeni, le ngxelo ineempawu ezithile. Eyona nto ibaluleke kakhulu kukuba yeyona inkulu emhlabeni kuba inkulu kunonkala omkhulu waseJapan kunye nononkala owaziwayo wesigcawu. Umahluko kuleya yangaphambili kukuba uhlala ngokusisigxina emhlabeni.
Kweli nqaku siza kujongana neempawu, indlela yobomi, ukondla nokuzala kwakhona kononkala.
2 Ukutya kwe-coconut crab
3 Unobumba osengozini
Unonkala lo ngowosapho lwe-arthropod kwaye unxulumene ngokusondeleyo unonkala njengoko kuchaziwe ngezantsi. Imilinganiselo yakhe enomdla ibangele ukuba uninzi lwenzululwazi luchaze ukuba uliliso lokwenene. Inqaku lokuqala elivelele kakhulu ubukhulu obukhulu. Iyakwazi ukulinganisa ukuya kuthi ga kwiikhilogremu ezi-4 kwaye ibe nobude obuphezulu phantse bemitha enye. Oku kumenza ukuba abe ngunonkala omkhulu kwaye oyikisayo emhlabeni.
Ngobukhulu obukhulu le nkala ifuna iimvula ezinkulu zangaphambili zemilenze kunye neenzipho ezoyikekayo ezinikezela ngokunyanzela ixhoba lazo. Ezi nzipho zinamandla atyumkileyo okanye ziyafana nezinye izilwanyana ezininzi ezizingelayo ngokuluma.
Nangona ndiqwalasele uhlobo lononkala womhlaba, iziqalo zokuqala ebomini besilwanyana zenzeka elwandle njengoko kusenzeka kwezinye iinkala. Imithi yekhokhonathi yimibungu emincinci ehamba ngemisinga yolwandle kwinyanga yokuqala yobomi. Njengoko bekhula, bavela ixesha elithile ukusuka emazantsi olwandle ukuya kukhangela uhlobo lweqokobhe elinokulenza ikhaya labo elihambahambayo. Kungenxa yoko le nto ndikhankanyile ngaphambili ukuba ijongeka ngokungathi ngunonkala.
Lo mbulali we-fossil ovela ekudaleni indawo yokuhlala kunye nokutshintsha ukusuka kwindawo yokuhlala emanzini ukuya kwilizwe elisemhlabeni kungenxa yelungu elilodwa elibizwa ngokuba yi-branchial lung elithe laphuhla kuyo yonke into kwaye liphakathi kwee-gill kunye nemiphunga. Njengoko unonkala wekhokhonathi ukhula emhlabeni, usuka kwelinye iponcha uye kwelinye kanye njengononkala.
Ukutya kwe-coconut crab
Ukutya kwezilwanyana ezingenamqolo ezisemngciphekweni wokuphela ayisiyi coconut kuphela njengoko umntu enokuthelekelela. Kuyinyani ukuba iikhokhonathi zezona zinto ziphambili ekudleni koononkala, yiyo loo nto igama labo liqhelekileyo. Ukuze ufikelele kubukhulu obukhulu, unonkala wekhokhonathi kufuneka atye phantse yonke into. Izidingo zabo zokutya zifikelela kwinqanaba lokuba bakwazi ukubuyela kwinto efileyo ukuze banelise iimfuno zabo.
Zikhula kancinci kwaye azifikeleli ekukhuleni ngokuzala de zibe neminyaka emi-6 ubudala. Nangona kunjalo, Oku kunjalo kuba ixesha lokuphila kwesi silwanyana linokufikelela kwiminyaka engama-30 nengama-40.
Ukutya kusekwe ikakhulu kulo naluphi na uhlobo lwezinto eziphilayo ezinokufumaneka endleleni. Iziqhamo ezibolayo, amagqabi, amaqanda kofudo, kunye nezidumbu zezinye izilwanyana. Olu hlobo lokondla lwenza ukuba kunganzima kakhulu ukukhula kwaye yiyo loo nto ifikelela kubungakanani obukhulu. Izazinzulu zikwazile ukubhala phantsi ukuba kwezinye iziqithi apho ukutya kwabo okuphambili, ikhokhonathi, oku kungangononkala bekhokhonathi, baye baba luhlobo lononkala abadlayo. Kungenxa yokuba iyakwazi ukuhlasela nasiphi na esinye isilwanyana ekufikeleleni kuso.
Ukwenza oku, isebenzisa iinzipho zayo ezinkulu kunye neenyawo zangaphambili ukuhlasela izilwanyana ezinjengeenkukhu, iikati, iigundane okanye nasiphi na isilwanyana esinokufikelela kuso ngozipho. Njengoko sisazi, ukuvula ikhokhonathi akuyondlwan 'iyanetha. Nangona kunjalo, ezi zilwanyana azinangxaki yokuvula esi siqhamo sinzima. Xa befumana ikhokhonathi kufuneka basebenzise iiplagi zangaphambili ukuyikrazula nokususa yonke into enefibre.
Ukufumana ukutya, eli nonkala luncedo lokuziva livumba kunye neempondo zalo ezinamandla okufumana ukutya nokuba kufumaneka imigama emide. Zidla ngokutya ebusuku kwaye zihlala imini yonke zifihle kwimiqolomba yamatye amancinci okanye zihlala zizomba imingxunya yazo ukuzikhusela kwezinye iinyamakazi. Izilwanyana ezichaphazelayo ezichaphazela abantu abaninzi ukuba babe ngabantu.
Ubuninzi bezi zilwanyana azikaze zifundwe ngokupheleleyo. Ngenxa yoku okanye hayi kuyaziwa ngokupheleleyo ukuba zingaphi iikopi ezikhoyo zizonke. I-International Union yoLondolozo lweNdalo (IUCN) iyichaze njengedatha engeyiyo. Ezona zifundo zisandula ukwenziwa ziveza ukuba uninzi lwezi crabs luye lwehla kakhulu. Oku kuncipha kwenani labantu kubangelwa zizinto ezahlukeneyo esinokuthi sizifumane ukuxhaphaza ngokugqithileyo kunye nokusilela kwemithetho ngoorhulumente ukukhusela ezi zibonelelo.
Njengokuba abantu bonyuka kwaye izilwanyana ezifuywayo zibandakanyiwe kwiziqithi ezininzi, kuye kwakho utshintsho kwindlela yokuziphatha, ukondla kunye neepatheni zokutya kwityathanga lokutya. Ukongeza, oku kunyuka kwabantu kuye kwavelisa ukusetyenziswa okukhulu kwe-coconut crab yenyama yayo emnandi. Le nyama ixabiseke kakhulu phakathi kwabemi beziqithi kwaye babaluleke kakhulu kwinkcubeko nakwinkcubeko.
Ibango loononkala lonyuke ngokumangalisayo ngenxa yoko abantu bancipha ngokuqatha. Kukho isifundo esisuka ku-1989 esiveze ukuba kwezi ziqithi kufunyanwa kuzo lo nononkala, umyinge wama-24 kanonkala ozingelwayo ngenyanga. Njengoko unokuthelekelela, kwiintlobo zolu hlobo lweekopi ezingama-24 ngenyanga linani elingafanelekanga. Oku kungalingana nokuzingela kwaminyaka yonke malunga nama-49.824 oononkala abasasazwa phakathi kokusetyenziswa kwalapha ekhaya kunye nokuthumela ngaphandle. kwezinye iindawo zehlabathi, ikakhulu eNew Zealand.
Bavumba ukwazi okungakumbi malunga nononkala lukakhukhunathi kunye nomxholo wayo ekubeni sengozini yokuphela.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Izilwanyana ezingenamqolo » Unonkala wekhokhonathi
Esona sibane siphezulu se-aquarium